श्रीमानसँग नियमित यौनसम्पर्क हुँदा गर्भमा बच्चा बसेन ! म के गरौ ? |
म २२ वर्षीया विवाहित महिला हुँ । मेरो विवाह भएको ३ वर्ष भयो । मेरो श्रीमान्को उमेर २८ वर्ष छ । विवाहदेखि नै हामीबीच असुरक्षित यौनसम्पर्क हुँदै आए पनि श्रीमान्ले वीर्य बाहिर फ्याँक्नुहुन्थ्यो । गत वैशाखदेखि हामीले बच्चा पाउने रहरले वीर्यलाई भित्रै स्खलित गर्न थाल्यौं । म मंसिर १ गते महिनावारी भएको ६ दिनपछि हामीले लगातार यौनसम्पर्क गर्यौं ।
उक्त महिना १४ गते मात्र यौनसम्पर्क भएन अनि हामीले २६ गतेपछि यौनसम्पर्क राख्न छोड्यौं, किनभने महिनावारी हुने दिन आउनुअघि यौनसम्पर्क राख्दा चाँडै महिनावारी हुन्थ्यो ।
श्रीमान्सँग वैशाखदेखि नियमित सम्पर्क हुँदा गर्भमा बच्चा बसेन, एकै पटक मंसिरपछि गर्भ रह्यो । मेरो समस्या के हो भने श्रीमान्सँग वैशाखदेखि नियमित यौनसम्पर्क गर्दा गर्भ बसेन, तर मलाई के शंका लागेको छ भने एक दिन मेरो श्रीमान्को साथीले हामी नभएका बेला हाम्रो तन्नामा वीर्य झारेर गए भन्ने मलाई शंका छ । किनभने सोही दिन मैले श्रीमान् घरमा नभएको मौका छोपेर हस्तमैथुन गरे । मेरो श्रीमान्का अनुसार उसको मोबाइलमा अश्लील चलचित्रहरू छन् । कतै श्रीमान्को साथीले हाम्रो तन्नामा झारेको वीर्यमाथि मैले मैथुन गरेकै कारण म गर्भवती भएको त होइन ? तन्नामा झरेको शुक्रकीटबाट कति समयसम्ममा गर्भवती हुन सकिन्छ कि सकिँदैन ?
कतिपय स्थितिमा पहिलो वा एकमात्र यौनसम्पर्कमै गर्भ रहन्छ, तर सधंै यस्तो हुँदैन । गर्भ रहन धेरै कुराको तालमेल मिल्नुपर्छ । मुख्य रूपमा पुरुषको शुक्रकीट र महिलाको डिम्बको मिलन हुनुपर्छ । सामान्य रूपमा भन्नुपर्दा गर्भधारण रहन मुख्य रुपमा १. डिम्ब निष्कासन, २. यौनसम्पर्क, ३. वीर्य स्खलन, ४. डिम्ब निषेचन तथा ५. डिम्बरोपणजस्ता कुरा हुनु आवश्यक छ । यौनसम्पर्कका बेला पुरुषको वीर्यस्खलन हुँदा निस्किएका करोडौं शुक्रकीटमध्ये केही पाठेघरको मुख हुँदै पाठेघर र त्यसपछि डिम्बबाहिनी नलीमा पुग्छन् । त्यहाँ परिपक्व भएको डिम्बको असंख्य शुक्रकीटमध्ये एकको मात्र मिलन हुन्छ । यसरी मिलन हुने प्रक्रियालाई निषेचन (FERTILIZATION) भनिन्छ । यसरी शुक्रकीट र डिम्बको मिलन भएको कोषलाई युग्मज (ZYGOTE) भनिन्छ र यही नै पछि विकसित भएर शिशु बन्छ ।
तपार्इं आफैंले उक्त तन्नामा बसेर वा सुतेर हस्तमैथुन गर्दा त्यो वीर्य तपार्इंको योनिभित्र पर्ने सम्भावना पनि देखिँदैन । माथि भनिएझैं डिम्ब निष्कासनको समय पनि मिल्नुपर्‍यो र शुक्रकीटमा योनिबाट यात्रा गर्दै पाठेघरको मुख, पाठेघर अनि डिम्ब वाहिनी नलीसम्म पुग्ने क्षमता राख्नुपर्‍यो । तपार्इंको सन्दर्भमा तन्नामा कसैले वीर्य झारेको शंकादेखि तपाईंको गर्भसम्मको तालमेल मिलेको देखिँदैन । फेरि तपाईं महिनावारी चक्रको कुन समयमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि तपाईंलाई थाहै होला ।
श्रीमान्सँगको नियमित यौनसम्पर्कबाट नभै यसरी गर्भ रह्यो होला भनी अनावश्यक चिन्ता लिनु उचित होइन । यहाँ चर्चा गरिएको भन्दा फरक कुरा भए कुरा अर्कै हो । साप्ताहिकबाट प्रतिकात्मक फोटो